AMISOM oo soo bandhigtay Tirada Askarta kaga dhimatay Soomaaliya. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / AMISOM oo soo bandhigtay Tirada Askarta kaga dhimatay Soomaaliya.
AMISOM oo soo bandhigtay Tirada Askarta kaga dhimatay Soomaaliya.
December 2, 2009 - By: Abdirahman. A
Masuuliyinta Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee u jooga dalka Soomaaliya howlo nabad ilaalineed ayaa waxaa ay soo bandhigeen tirada Askarta gudaha Soomaaliya uga dhimatay tan iyo marki ay yimaadeen.
War qoraal ka soo baxay AMISOM oo loo qaybiyey Saxaafada ayaa lagu sheegay in mudadi ay ku sugnaayeen gudaha dalka Soomaaliya ay uga geeriyoodeen 60-Askari kuwaas oo ka mid ah Ciidanka nabad ilaalinta ah,waxaana ku dhaawacmay sida ay sheegeen 200-Askari 3-sano la soo dhaafay ay ku sugnaayeen.
Saraakiisha AMISOM ayaa sidoo kale War Saxaafadeedka ku sheegeen in iminka Ciidanka nabad ilaalinta ay weeraro iyo weliba dagaalo kala kulmaan kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho ayna fariisimo ku leeyihin.
Ugu dambeynti waxaa ay sheegeen in Ciidanka AMISOM tan iyo marki la geeyey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ay wax weyn ka qabteen Amniga magaalada caasimada.
Ciidamada AMISOM ayaa tiro dhowr jeer hore lala beegsaday qaraxyo ismidaamin ah iyo weliba weeraro kaga yimaaday kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda joogitaankooda.
Si kastaba war saxaafadeedka ayaa imaanaya xilli maanta magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda u ka furmdi doono kulan looga hadli doono sidii kalsooni loogu abuuri lahaa Ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Maxamed Cabdi Xuseen(Kuuriya)